Momba anay - Jiangsu Gaoyuan International Trade Co., Ltd.
Jiangsu Gaoyuan International Trade Co., Ltd. dia miorina eo amin'ny seranan-tsambon'i Lianyungang (80 kilometatra), ny lohataona atsinanana amin'ny kaontinanta Eurasia, ny fiantombohan'ny làlambe iray amin'ny fehikibo iray. Tsy manam-paharoa ny toerana ara-jeografika, ary ampy ny loharanon-karena. Latsaky ny 200 kilometatra miala ny mpanamboatra dimy ny resina solika C5, ny fitaovana lehibe indrindra amin'ny fitaovana famantarana ny arabe. Izy io dia manana tombony tanteraka amin'ny laharam-pahamehana sy ny vidiny ambany.
Gaoyuan International Trade Co., Ltd. dia sampana iray an'ny Dahan Transport. Dahan Group Corporation dia nirotsaka tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra ao an-trano ary ny fanondranana ireo fitaovana manisy marika be lalana nandritry ny 30 taona mahery taorian'ny nananganana azy tamin'ny martsa 1986.
Tanjaka ara-teknika: manana orinasa matihanina sy ara-teknika enina ny orinasa, izay nikarokaroka tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana tao amin'ny indostrian'ny firakotra arabe nandritra ny fito taona mahery, ary manana tanjaka ara-teknika mifandraika amin'izany. Ny orinasa dia nitazona fitarihana ara-teknika akaiky sy fiaraha-miasa amin'ireo manam-pahaizana maro avy amin'ny Ministeran'ny Serasera nandritra ny fotoana ela.
Ny fahaizan'ny orinasa mpamokatra:
Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manana milina enina famonosana semi-mandeha enina, izay afaka mamokatra arabe mihoatra ny 200 taonina manamarika ireo vokatra firakotra mafana miempo isan'andro. Mba hiantohana ny famatsiana vokatra be dia be ho an'ny mpanjifa.
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nifikitra tamin'ny fitsipiky ny kalitao aloha ny vokatr'ilay orinasa, ary nitombo hatrany ny isan'ny mpanjifa vahiny. Ny mpanjifa avy amin'ny firenena 140 sy faritra manerana an'izao tontolo izao dia niara-niasa taminay, ary ny mpanjifa avy amin'ny firenena 9 dia nisafidy ny hiasa manokana maharitra ho an'ny vokatra avy amin'ny orinasanay.
Fepetra takina amin'ny orinasa sy voninahitra:
Ny orinasa dia manana mari-pankasitrahana valo ho an'ny firenena, mari-pankasitrahana efatra ary marika famantarana roa malaza. Nahazo amboarina dimy tao amin'ny indostrian'ny firaketana ny sonia an-dàlam-be.